Skinshe Gift Set အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
QR ကုတ် scan ဖတ်လို့ရပါတယ်
လက်ကား - cb
09777824737 mdy instock
နဂိုအသားအရေညိုမဲခြင်း... အသားအရေမွဲခြောက်ခြင်း.. ဆိုးရွားစွာနေလောင်ထားခြင်းများကို ထိရောက်မှုအလွန်ရှိသော Skinshe မှ အချိန်တိုတိုအတွင်းသိသိသာသာ ဖြူဝင်းစိုပြေ လာစေပါတယ်..
ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး အမှန်တကယ်ထိရောက်သော Skinshe Gift Set လေးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး လူကြိုက်အများဆုံး Skincare တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...
မျက်နှာအသားအရေဖြူဝင်းစေရုံသာမကပဲ နေလောင်ဒဏ်ကိုကာကွယ်ပေးခြင်း... တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက်နှင့် အမဲစက်များ ကူညီဖယ်ရှားပေးခြင်း... အသက်အရွယ်ကြောင့်ရရှိလာသောအရေးအကြောင်းများလျော့ချပေးခြင်း တို့အပြင် မျက်နှာအသားအရေကိုအမြဲတင်းရင်းနေစေပါ
Night Cream တို့ပါဝင်ပါတယ်...
ပထမဆုံး Skinshe Cleansing Foam နဲ့မျက်နှာသစ်ရပါမယ်.. ပြီးရင် Intensive Moisturizer (ပန်းရောင်ဗူး) လေးကိုလိမ်းရပါမယ်... ပြီးရင်တော့ နေ့ဘက်ဆို Day Cream (ငွေရောင်ဗူး) လေးကိုလိမ်းပြီး ညဘက်ဆိုရင် Night Cream (ရွှေရောင်ဗူး)လေးကိုလိမ်းပေးရုံပါပဲ...
တနေ့ (၂)ကြိမ်ပုံမှန်လိမ်းပေးရုံနဲ့ တပတ်အတွင်းသိသာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ...
မှန်မှန်လေးသုံးပေးပြီး နဂိုအသားအရေထက်ပိုမိုလှပဖြူဝင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ ... !!
အမည်: Skinshe Gift Set